Sikulethela ukukhishwa kwe-Netflix ngoJulayi 2017 | Izindaba zamagajethi
Sikulethela ama-premieres eNetflix ngoJulayi 2017 (ne-HBO neMovistar +)
Silapha futhi ukukulethela okuhle kakhulu ekusakazeni okubukwayo. INetflix njengomhlinzeki ivuselela njalo ikhathalogi ukusinikeza okuqukethwe okuhle, noma okungenani ngokuhlukahluka okuningi, yingakho kumele senze le mihlahlandlela ezokusiza ungaphuthelwa ngokuphelele yilokho okuzokhishwa. Futhi njengoba sazi ukuthi ungumthandi omuhle weNetflix (ngeke sikutshele ukuthi asiyona), sikulethela okuhle kakhulu.
Njengoba wazi kahle, UJuni usehambile futhi sekuyisikhathi sokuvuselela ingxenye yekhathalogi ngochungechunge olusha lweNetflix, ama-movie nama-documentary ngoJulayi 2017. Naka futhi uqaphele, ngoba siqinisekile ukuthi ngeke ufune ukuphuthelwa noma yikuphi kwalokhu kuqhuma kwamabhomu esikulungiselele kona.
Sizokweqa ezigabeni ezahlukahlukene konke iNetflix esilungiselele khona ngoJulayi, sihlukanisa phakathi kochungechunge, ama-movie, amadokhumentari nokuqukethwe kwezingane, ngakho-ke sebenzisa kakhulu inkomba yethu ukuya ngqo esigabeni esidala inzalo enkulu, njengale uzokwazi ukuthola ngendlela elula futhi esheshayo into evumelana nezintshisekelo zakho.
1 INetflix ngoJulayi 2017
1.1 Uchungechunge lweNetflix ngoJulayi 2017
1.2 Ama-movie we-Netflix ngoJulayi 2017
1.3 Imibhalo ye-Netflix ngoJulayi 2017
1.4 Okuqukethwe kwezingane zeNetflix ngoJulayi 2017
2 I-HBO ngoJulayi 2017
2.1 Uchungechunge lwe-HBO ngoJulayi 2017
2.2 Ama-HBO Movie ngoJulayi 2017
2.3 Okuqukethwe kwezingane ku-HBO Julayi 2017
3 IMovistar + ngoJulayi 2017
3.1 IMovistar + cinema ngoJulayi 2017
3.2 Uchungechunge lweMovistar + ngoJulayi 2017
3.3 Imibhalo ye-Movistar + ngoJulayi 2017
4 Ukuqhathaniswa kwentengo
INetflix ngoJulayi 2017
Uchungechunge lweNetflix ngoJulayi 2017
Ngezansi sikushiya uhlu oluphelele, kepha sizobheka lokho okubonakala kuthakazelisa kakhulu. Siqala ngakho I-Bates Motel, uchungechunge olandisa isisekelo sePsycho (ifilimu ka-Alfred Hitchcock) sifinyelela kwisizini yesihlanu, okunye okuhle kubathandi bokwesaba okwethusayo nokwengqondo. Ngakolunye uhlangothi, iphupho labadlali abaningi bamageyimu nalo lifezekile, Castlevania ekugcineni ithola uchungechunge lwayo oluzokhishwa ngoJulayi 7 futhi oluqhutshwa yiNetflix uqobo, umanduleli wale phrojekthi enhle.
INetflix inikeze ama-premieres amaningi ochungechunge lwangempela njenge U-Ozark Nabangane baseKholeji Ikhwalithi yokuqukethwe kuzofanele ihlaziywe masonto onke.
I-Bates Motel - Isikhathi sonyaka 5 kusuka ngoJulayi 1
Omunye wePunch Man - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 1
IChema - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 1
Girl New - Isikhathi sonyaka 5 kusuka ngoJulayi 1
Ukudonswa - Premiere kusuka ngoJulayi 1
Castlevania - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 7
UMbuso Wokugcina - Isikhathi sonyaka 2 kusuka ngoJulayi 7
I-Degrassi: Isigaba Esilandelayo - Isikhathi sonyaka 4 kusuka ngoJulayi 7
Shadowhunters - ISizini 2B kusuka ngoJulayi 11 (bazosakaza isiqephu samasonto onke)
Abangane abavela ekholeji - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 14
Regin - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 16
Umdubuli - Isizini 2 kusuka ngoJulayi 19 (bazosakaza isiqephu samasonto onke)
Ozark - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 21
Ama-movie we-Netflix ngoJulayi 2017
Amabhayisikobho nawo awasasileli emuva, sinama-premieres amahle njengeStraight Outta Compton etshela ukuqala kwe-rap yomgwaqo ethakazelisa kakhulu e-United States ngesandla sikaDkt Dre phakathi kwabanye, enconyelwe kakhulu abathandi bomculo ngokujwayelekile. Ngakolunye uhlangothi, kukhona isimanga endaweni yonke ye-Star Wars, impela iThe Force Awakens ekugcineni ifika kuNetflix ... uzophuthelwa yini? Ngenye yamafilimu athakazelisa kakhulu ochungechungeni esiwabonile, futhi sikuncoma kakhulu. Wonke amanye ama-movie angabonakala engathandeki kangako, kepha angonga intambama yakho yasehlobo:
Ukunyamalala kuka-Eleanor Rigby
I-Outta Compton eqondile - 4 ngoJulayi
Ngithathe - 8 ngoJulayi
IJurassic Park - 9 ngoJulayi
Ukulambela Amandla - 11 ngoJulayi
Phansi Emathanjeni - 14 ngoJulayi
Isitimela i-D - 15 ngoJulayi
I-Star Wars: I-The Force Awakens - 19 ngoJulayi
UDeveli Omuhle - 20 ngoJulayi
Amazulu Ngempela - 24 ngoJulayi
UJessica James Omangalisayo - 28 ngoJulayi
Imibhalo ye-Netflix ngoJulayi 2017
Usuyakwazi lokho INetflix nayo inesiza salabo abafuna ukukhuliswa ngokupheleleLokhu okuqukethwe okwedokhumentari okushaya iNetflix ngoJulayi 2017.
Ama-Standups - 4 ngoJulayi
Disney Imvelo - 4 ngoJulayi
En cinga amakhorali - 14 ngoJulayi
Aditi Mittal - 14 ngoJulayi
Ithuba Lokugcina U (T2) - Julayi 21
Amadodakazi Okudalelwa - Julayi 28
Okuqukethwe kwezingane zeNetflix ngoJulayi 2017
Luna Petunia - Isizini se-2
UBuddy Thunderstruck - 14 ngoJulayi
Umthakathi owedlula bonke - 21 ngoJulayi
I-HBO ngoJulayi 2017
Uchungechunge lwe-HBO ngoJulayi 2017
Kufanele sime lapha ukuphawula ngokuthi yini ebaluleke ngempela, asikhulumi ngokunye ngaphandle kokufika kuka IGame of Thrones entathakusa ngoMsombuluko, Julayi 17 ezikrinini ezincane zekhaya lethu. Asikwazi ukulinda ukubona isikhathi sokugcina solunye lochungechunge oluhamba phambili ngaso sonke isikhathi, futhi uyazi nawe. Kulabo abangenakho okubhaliselwe iMovistar + kungaba yinto ehehayo yokuqhathanisa izinsizakalo ze-HBO, asinakho ukungabaza okuncane. Kepha iGame of Thrones ayizi yodwa ngoJulayi, sizobona wonke ama-premieres asele.
Umdlalo Wamakhosi - Isikhathi sonyaka wesi-7 - ngoMsombuluko ngoJulayi 17 kuVOS
kweqhwa - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 6
Okungavikelekile - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 24
Ballers - Isikhathi sonyaka 3 ngoJulayi 24
Igumbi 104 - Umbukiso wokuqala ngoJulayi 29
Ama-HBO Movie ngoJulayi 2017
I-cinema ibuye izuze isikhala ku-HBO ngenyanga kaJulayi, ake sibone ukuthi isinikeza ini. Sizogqamisa inguqulo yesimanje yeRobocop eyakhishwa ngo-2014, yize mhlawumbe okuthakazelisa kakhulu ukufika kwamafilimu amathathu okuqala kusaga leTransformers. Iqiniso ukuthi i-HBO iyaqhubeka nokuzama, kepha ayiveli nakancane ngezinto zayo ezintsha maqondana ne-cinema.
Abangena ngaphakathi ekilasini
Ngifuna ukuduma kakhulu
Master and Commander: Olunye uhlangothi Lomhlaba
Transformers: Ukuziphindiselela kwabawile
Abaguquli: Ubumnyama benyanga
Magic Mike XXL - Julayi 9
Umzila ongcolile - Julayi 9
Iqembu - Julayi 16
Ama-Gallows - Julayi 30
Okuqukethwe kwezingane ku-HBO Julayi 2017
Kwabancane sinabafikayo abasha ku-HBO Spain, ngaphandle kokungabaza kufanele silande Rank kanye nokusungulwa kukaHugo, izindaba ezimbili ezihlonishwayo ezigqwayizayo ezizogcina abancane endlini bezijabulisa uma bengekho olwandle noma echibini. Impela Kule nyanga iqembu le-HBO Spain lilethe okuqukethwe okuhle kwezingane, futhi sincoma ukuthi ungaphuthelwa.
UTinker Bell kanye neThe Legend of the Beast
IMovistar + ngoJulayi 2017
IMovistar + cinema ngoJulayi 2017
Phakathi kwe-cinema efika eMovistar + ngoJulayi 2017 asikwazi ukugqamisa kakhulu, noma kunjalo i-Villaviciosa de al Lado, amahlaya aseSpain afika eMovistar + ngoJulayi 7. Ngakolunye uhlangothi, kubonakala sengathi uJulayi bekungeyona inyanga eyintandokazi kaMovistar ukukhipha i-cinema, isici sayo esinquma kakhulu.
U-oyili ushelele - Julayi 1 ngo-22: 00 ebusuku.
Umgwaqo waseLondon - Julayi 5 ngo-22: 00 ebusuku.
IVillaviciosa kamakhelwane - Julayi 7 ngo-22: 00 ebusuku.
Umthakathi Wothando - Julayi 7 ngo-22: 30 ebusuku.
Ikusasa lethu - Julayi 12 ngo-22: 00 ekuseni
Ben-noHure - Julayi 14 ngo-22: 00 ebusuku.
Onogolantethe - Julayi 21 ngo-22: 00 ebusuku.
Izilwane zasebusuku - Julayi 22 ngo-22: 00 ebusuku.
Intombazana - Julayi 26 ngo-22: 00 ebusuku.
Ikhaya likaMiss Peregrine lezingane ezikhethekile - Julayi 28 ngo-22: 00 ebusuku.
I-Comanchería - Julayi 29 ngo-22: 00 ebusuku.
Uchungechunge lweMovistar + ngoJulayi 2017
Ngokusobala lapha senza okunye ukuma ngoba ubusika sebusondele. IGame of Thrones ifika eMovistar + ngoJulayi 17 ngo-03: 00 ekuseni ngqo ngqo, ukukhonjiswa ngasikhathi sinye e-United States of America nokunikeza i-VOS. Isiqephu esifanayo sizophindwa ngoMsombuluko wangomhla ziyi-17 ku-23: 35 kusihlwa kulabo abangakwazanga ukusithokozela entathakusa, yize kungeke kube yimina ongalinda isikhathi eside kangako.
ICode Black - Isikhathi sonyaka 2 - Julayi 5 ngo-23: 30 PM
Game of Thrones - Isikhathi sonyaka 7
Imibhalo ye-Movistar + ngoJulayi 2017
Omunye umgodi walabo abafuna ukuwulima, imibhalo ezinhle uMovistar + asinikeza zona ukuze uphuze ngenkathi uthola ulwazi olusha.
Impilo yami phakathi kwezintuthwane - Julayi 17
I-Adventure Yokugcina Yejuba - Julayi 4
Umlando wamahlaya - Julayi 11
Icala Elinelukuluku le-Soviet Advertising Agency - Julayi 3
Endabeni I-Movistar + Kunezinye izindlela eziningi, kepha ikakhulukazi kuzofanele sikhethe phakathi kokungeza cishe ama-euro ayishumi ngenyanga uma sifuna i-cinema, nama-euro ayi-10 ngenyanga uma sifuna uchungechunge. Ngaphandle kwakho konke lokhu, sizoba nephakheji yakho yethelevishini ezoba neziteshi zayo bukhoma njenge- # 7 enokuqukethwe okukhethekile. Indlela enhle yokuqasha amaphakheji wethelevishini kaMovistar + ukuwahlanganisa nefayibha nokunikezwa kweselula okubiza kancane. Ngamafuphi, uma ufuna uchungechunge nama-movie kuphela, i-Netflix kuseseyokunikezwa kwekhwalithi / intengo engcono kakhulu, okungenani ngenkathi kungenzeka ukuthi kukhuphuke izintengo zokubhalisile kusenamahemuhemu maduzane. Sizohlala sikukwazisa ku-Actualidad Gadget.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Sikulethela ama-premieres eNetflix ngoJulayi 2017 (ne-HBO neMovistar +)
Ngo-2040 ngeke usakwazi ukuthenga izimoto zikaphethiloli noma zikadizili eFrance
Ukuqapha okusha okuvela ku-AOC nasePorsche "kuqeda" izintambo